लोकसेवा विषेशः परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने ? सूत्रसहित (अङ्क–२४) « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
लोकसेवा विषेशः परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने ? सूत्रसहित (अङ्क–२४)
जुनसुकै परीक्षा किन नहोस्, परीक्षा भन्ने बित्तिकै अधिकांशलाई तनाव हुन्छ । तर, नपढेर भन्दा पनि पढ्न नजानेर अनुत्तीर्ण हुनेहरु धेरै छन् । यसो त धेरैलाई पढ्ने तरीका पनि थाहा छैन। हामीले सामान्य तरीकाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने केही टिप्स् उल्लेख गरेका छौं ।
परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पढाइको वातावरणलाई राम्रो बनाउन आवश्यक छ । सही समयमा पढ्नु निकै आवश्यक त छ नै, पढ्ने क्रममा अरु धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिन समेत जरुरी छ । यी हुन् लोक सेवा पास गर्ने १० सूत्र ।
१) आफू पढ्न बस्ने कोठा उज्यालो र सफा राख्नुहोस्। तपाईको कोठा सफा र उज्यालो छ भने पढाइमा मन एकाग्र हुन्छ। त्यसले राम्रो नतिजा ल्याउन मद्दत मिल्छ ।
२) लगातार नपढ्नुहोस्। कम्तिमा आधा एक घण्टामा फ्रेस हुनुहोस्। जसको लागि तपाई आफूलाई मनपर्ने गीत सुन्न सक्नुहुन्छ । यसबाहेक हल्का हावामा हिँडडुल गर्दा पनि हुन्छ ।
३) नियमित नुहाउनुहोस् । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई निकै राम्रो गर्छ र ज्यानलाइ तन्दुरुस्त राख्छ । बीचमा रोकिएर अध्ययन गर्दा पढेको कुरा स्मरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
४) पानी प्रशस्त पिउनुहोस् । पढ्ने क्रममा तपाईंको शरिरमा भएको धेरै शक्ति नाश हुने हुनाले पनि पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउनाले मुड फ्रेस राख्नुका साथै अध्ययनप्रति रुचि बढ्छ ।
५) अध्ययन गर्ने कोठामा टेलिभिजन नराख्नुहोस् । तर, ताजा जानकारी तथा समाचारको लागि रेडियो टेलिभिजन हेर्नुहोस् । विशेषगरी लोकसेवाको तयारी गरिरहेकालाई यो टिप्स काम लाग्छ ।
६) बेला बेलामा पढेका कुराबारे साथीहरुसँग छलफल गर्नुहोस् । एकोहोरो अध्ययनभन्दा छलफल र अन्तरक्रियाले बढी ज्ञान दिन्छ । छलफलमा अध्ययनको विषयवस्तु, लेखाइको तरीका लगायतका विषयमा व्यवहारिक ज्ञान लिन सकिन्छ ।
७) पिरो खानेकुरा सकभर नखानुस् । किनकि गहिरो अध्ययनका बेलामा शरीरको तापक्रम वृद्धि हुन्छ र झन पिरोले दिमाग छिटो थाक्छ । दिमागलाई स्फूर्ति राख्न सादा खाना र पानीमा जोड गर्नुस् ।
८) तिथिमिति सम्झिँदा क्रम मिलाएर सम्झनुहोस् । अथवा उक्त मितिको बारेमा प्रशस्त जानकारी र त्यस जानकारीको बारेमा छलफल गर्नुहोस् । मिति र घटनाक्रम सँगै राखेर पढ्नुहोस्, यसले सम्झन सजिलो हुन्छ ।
९) पढ्नु र सम्झनु अलग कुरा हो । त्यसैले पढेको कुरालाई सम्झन वा ताजा राख्न ‘रिभिजन’ गर्नुहोस्। अध्ययनका साथै नोट बनाउँदा स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ । नोट तत्काल अध्ययनका लागि मात्र होइन, भविष्यको तयारीका लागि पनि काम लाग्छ ।
१०) जे पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई सकाउने उद्देश्यका साथ पढ्नुहोस् । आफूले पढ्नुपर्ने सबै विषयलाई उति नै माया गर्नुहोस् । प्रसङ्ग आउने ठाउँमा आफूले पढेकै विषयमा छलफल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति : असार ६, २०७९ सोमबार ५ : ३० बजे